सरकारसँग सी के राउतको सम्झौतापछि मधेसमा तरङ्ग, फोरम र राजपा नजिकिए - Jhilko
सरकारसँग सी के राउतको सम्झौतापछि मधेसमा तरङ्ग, फोरम र राजपा नजिकिए
सरकार र डा. सीके राउत नेतृत्वको ‘स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन’ बीच भएको ११ बुँदे सम्झौताले राजपा र संघीय समाजवादी फोरमलाई निकट बनाउँदै लगेको छ । यी दुईबीच एकता भएमा सत्तारूढ दलका लागि समस्या हुन सक्ने देखिएको छ ।
सम्झौताको दबाब महशुस गरेर सरकारमा रहेको संघीय समाजवादी फोरमले राष्ट्रिय जनता पार्टीबीचको एकता प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन पहललाई तीव्र पारेको छ ।
केही दिन अघि राजपालाई पठाइएको पत्रलाई राजपाले थन्क्याएर राखेपछि सम्बन्ध बलियो पार्ने देखिएको छ । यो सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनु केही दिनअघि मात्रै फोरमले औपचारिक रूपमा राजपालाई वार्ताका लागि एक पत्र पठाएको थियो ।
फोरम अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका उपेन्द्र यादवले राजपा अध्यक्ष मण्डलका नेताहरूसँग बालकुमारीस्थित पार्टी कार्यालयमा बेलुका ६ –७ बजेको बीचमा भेट गरेका थिए । राजपाका नेताहरूसँग पार्टीको एकीकरणबारे पठाएको पत्रको बारेमा सोधखोज गरेका अध्यक्ष यादवले एकीकरणबारे पहल लिन राजपाका नेताहरूलाई आग्रह गरेका थिए ।
पार्टी स्रोतका अनुसार सरकारले डा. सीके राउतसँग सम्झौता गर्न खोजेको चाल पाएपछि राजपालाई वार्ता गर्ने विषयमा पत्र पठाएका थिए । फोरमले वार्ता कमिटी तीन महिनाअघि बनाएको भए पनि त्यसबारे औपचारिक जानकारी राजपालाई दिएको थिएन । एक महिनाअघि संयोजकमा महेन्द्र राय नियुक्त भएपछि आफूलाई फोरमको वार्ता कमिटीबारे केही थाहा नभएको बताएका थिए ।
संयोजक रायले फोरम र आफूहरूको एजेन्डा एउटै भएको बताउँदै इमानदार पहल भए हामी एकीकरण गर्न तयार रहेको बताएका थिए । त्यतिखेर वार्ताबारे कुनै पहल नलिएका फोरम अध्यक्ष यादवले राजपाका नेताहरूसँग भेटेर वार्ताबारे पहल अघि बढाउनु महत्वपूर्ण रहेको देखिएको छ ।
समुद्रमुनिबाट सबैभन्दा लामो चिनियाँ सुरूङ रेल
चिची पनि पापा पनि ? एनआरएनएलाई दोहोरो नागरिकता असम्भवः...
उनले भने ‘दुइटा नाउमा खुट्टा राख्ने मान्छे सागर तर्न सक्दैन । चिची पनि पापा पनि...
बहुपति प्रथाको कथामा ‘सहायक श्रीमान्’
कर्णाली प्रदेशको हुम्लामा छायाङ्कित बहुपति प्रथामा आधारित डकुमेन्ट्री फिल्म ‘सहायक...
ट्रम्प दम्पत्तिबीच पारपाचुकेको संयोग दोहरिने हो कि भन्ने अडकल पनि काट्न थालिएको...